SEO Tricks Ukusuka Semalt - I-Backlink Local kunye nendlela yokuzifumana
I-backlink yendawo yenzeke kuphela ngenjongo eyodwa ephambili: ukwakha ukubaluleka kwindawo ethile. I-backlink eqingqiweyo yendawo kufuneka ilandele le migaqo elandelayo: ukubuyisela iindwendwe kwiwebhusayithi kwaye uthethe ngeemfuno okanye ukhetho lweemarike zendawo.
Umphathi weNtengiso kumPhathiswa we-10 (Semalt , uJason Adler, uchaza apha konke okufunekayo ukuba wazi i-backlinks yangaphakathi
Amashishini afaka iimarike zengingqi akanalo igunya eliphezulu kwi-injini yokukhangela . Basenokuba ngamashishini amancinci afana nawe. Kodwa ekubeni banamandla kakhulu, ukufumana unxibelelwano kubo kungabaluleka ngakumbi.
Isizathu sokuba kutheni abanikazi abancinci babheke kwi-backlink yendawo ngenxa yemingcele. Ininzi, kungabikho kokuqukethwe komgangatho abavakalisi abakhulu abajongeyo, ngenxa yebhajethi. Njengomrhwebi, kulungile ukufikelela kwiinkwenkwezi, kodwa kubalulekile ukuqonda ipharamitha yokusebenza. Akukho nto engenziyo ukwenza ishishini kwiphondo elilodwa ngelixa ijolise kwizithuthi ukusuka kwelinye.
Eminye yemisebenzi eya kunceda ibhizinisi iqalise kwi-backlinking yendawo yokwakha iziqulatho, ukujonga iirejista jikelele, nokuqinisekisa ukuba yonke inkcazelo yezoshishino ikhoyo kwaye ichanekile. Ukudala isicatshulwa kunceda umnini ufake i-NAP (igama, idilesi, inombolo yomnxeba), okanye unxibelelwano kwikhasi lokungena kwi-site yabo, kwiwebsite efanelekileyo engenayo ugaxekile. Kwakhona kwandisa amathuba eenjini zokukhangela kwixesha lophando xa kunokwenzeka ukuba ukhuphiswano lombuzo luphantsi. Fumana igama lomtshini kwinani elingenamkhawulo wemithombo. Indawo ye-Yext ne-Moz ingakunceda ngokukwakhiwa kwesicatshulwa.
Amathuba okuxoka naphina
Kukho amabango ukuba indawo yokuhlala idibanisa isakhiwo ayiyinto engavamile, ayiyiyo inzuzo okanye ayikho into. Iimfuneko zokudala unxibelelwano kwiiwebhusayithi zincinci kakhulu kuba amagama angundoqo asekhaya angenawo umthamo omkhulu. Amaphepha eemeko kuloo mmandla, amanye amashishini asekuhlaleni, okanye iincedo zengingqi ezisebenza njengabaxhasi.
Amathuba abanzi, kodwa ngaphambi kokuba athathe indawo entsha, ziqonde ukusilela kwayo. I-radius echazwe ichaza indlela amacebo okukhuthazwa kwezoshishino enza ngayo. Izithintelo ezikhoyo zikhuthaza ukwakhiwa kunye nokusebenza kwamathuba okufumana.
Vula isixhobo soqhagamshelwano ukuqala ukufumana iinjongo
Nasiphi na isilungileyo esihle kufuneka sisebenze kwiwebhusayithi. Nangona kunjalo, cinga ukuma kwezoshishino, kunye nokuncintisana. Uphando malunga nemigqaliselo engundoqo yendawo kwaye ubone indlela enye inqanaba leshishini kubo kunye nalabo abaneendawo eziphezulu.
Yenza uluhlu lwale nkampani uze ubone ukuba yiyiphi i-backlinks ayifumene ngaphambili. Thelekisa ukubona ukuba ziphi izixhumanisi ezabelwana ngazo njengokuba kukho ukhuphiswano lwamanje kwimarike. Yenza uqhathaniso kwiprofayili ye-backlink yesayithi, ukubona oko kukuphosakeleyo. Susa zonke iifowuni eziphindaphindiweyo eziqhelekileyo kumncintiswano kwaye ulandele abo ababenayo indawo yabo. Isiza sisesimweni esingcono sokukhuphisana ngoku xa senza oku ngaphandle kweziphoso.
Ukufumana Amathuba amaninzi
Ukuba ukhuphiswano luyabamba, into enokuyilungelelanayo kunye nemvelo yenzelwe ukufumana amanqaku amaninzi. Hlola amanye amashishini asekuhlaleni kungekhona kwishishini langoku ukuze azi indlela abakha ngayo. Kukho iziqhamo ezisezantsi ezilenga ngaphandle apho ezinokuxhasa i-shishini elincinci ngaphambili. Enye indlela kukufumana amashishini aphezulu ekuthengiseni kwiinkonzo ezinjengeYelp aze azifake kwisixhobo sokuhlaziya i-backlink. Bangeke banikeze nayiphi na ixabiso, kodwa baqulethe ulwazi oluninzi malunga neendlela ezahlukeneyo zokukhuthaza.